merolagani - बुटवल पावरले फिक्स्ड डिपोजिटको पैसा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्दा नाफा घट्यो
बुटवल पावरले फिक्स्ड डिपोजिटको पैसा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्दा नाफा घट्यो
Nov 17, 2019 08:09 AM Merolagani
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (BPCL) ले ६ करोड ९३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३३.२२ प्रतिशत कम हो। गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कम्पनीले १० करोड ३८ लाख २६ हजार नाफा कमाएको थियो।
कम्पनीले फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेको पैसाको ठूलो हिस्सा नयाँ आयोजनाहरुमा लगानी गरेका कारण नाफा घटेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। जसका कारण कम्पनीको वित्तीय आम्दानी घट्न पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा ५ करोड ६ लाख ४५ हजार रहेको कम्पनीको वित्तीय आम्दानी चालु आवको सोही अवधिमा घटेर ८४ लाख ९१ हजारमा सीमित भएको छ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी भने ७८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बढेर २० करोड ७७ लाख ६३ हजार पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत उत्पादन खर्च ७५ लाख २३ हजार र वितरण खर्च ३३ लाख ८७ हजारले बढेको छ।
२ अर्ब ४४ करोड ५ लाख चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको त्रैमासिक प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ २८५ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ। कम्पनीको वार्षिक मूल्इ आम्दानी अनुपात ३२.०४ गुणा रहेको छ।
कम्पनीको लगानी रहेको ३० मेगावाट क्षमता भएको न्यादी हाइड्रोपावरको निर्माण कार्य भइरहेको छ भने ३७.६ गुगावाट क्षमताको काबेली ए आयोजना सस्पेन्ड गरिएको छ। त्यसैगरी, १४० मेगावाट क्षमताको लोवर मनाङ्ग मस्र्याङ्गदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक आयोजनाको विद्युत उत्पादन लाइसेन्स प्राप्त भएको र पीपीए प्रक्रियाको लागी १०४ मेगावाटको सम्झौता भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
कोरोना भाइरसः दक्षिण एशियामा पढाईमाथि कस्तो पर्याे असर?
यूरोपका अधिकांश भागमा बच्चाहरु फेरि स्कुल जान सुरु गरिसकेका छन् । तर विश्वका कयौँ मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउन तथा प्रतिबन्धका बीच हाल सबै पढाई बन्द रहेको छ ।
दशैँतिहारमा घुम्नेका लागि कस्ताे बन्ला टुर प्याकेज ?
Sep 19, 2020 07:46 PM
थप १२०४ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेकाे संख्य ४०१ पुग्याे
ब्याजदरको तीन महिने खेल सुरु, नबिलले गर्यो सुरुवात, मंसिरमा चरम तरलता सङ्कट हुने प्रक्षेपण
Sep 19, 2020 09:06 AM